Afaka ny ho Sambatra Ireo Nanambady Fanindroany | Ho An’ny Fianakaviana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Letonianina Lingala Litoanianina Luo Macua Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mongol Myama Ngabere Norvezianina Nzema Ossète Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tok Pisin Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Umbundu Vietnamianina Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
ZO: * “Matin’ny kansera ny vadiko, rehefa nivady 34 taona izahay. Nanambady an’i Hary aho, tatỳ aoriana. Hitany anefa hoe nampitahaiko tamin’ilay vadiko taloha foana izy. Matetika koa ireo namanay no niresaka ny toetra tsaran’ilay vadiko taloha, ka vao mainka i Hary sosotra.”
HARY: “Tsapako, rehefa nivady izahay sy Zo, fa tena latsa-danja aho raha mitaha amin’ilay vadiny taloha. Mamy hoditra mantsy izy io, tsara fanahy, ary nahalala fomba. Tena nifankatia be izy roa. Asa izahay sy Zo raha mba ho hoatr’izany koa.”
Nisaraka tamin’ny vadiny voalohany i Hary. Faly izy fa nahita an’i Zo. Tsapan’izy ireo anefa hoe miatrika olana tsy hitany tao amin’ilay tokantranony voalohany izy ireo. *
Nanambady fanindroany ve ianao? Ahoana no fahitanao an’ilay izy? Nanambady indray i Tatamo, telo taona taorian’ny nisarahany tamin’ilay vadiny voalohany. Hoy izy: “Raha vao manambady ianao dia mieritreritra hoe ho lamban’akoho ilay fanambadiana. Tsy hoatr’izany intsony ny fihetseham-ponao rehefa manambady fanindroany ianao. Efa tsy nety mantsy ilay voalohany.”
Maro amin’ireo nanambady fanindroany anefa no niezaka, ka sambatra am-panambadiana. Afaka ny ho sambatra koa ianao! Andeha isika hijery olana telo fahita matetika sy ny toro lalan’ny Baiboly afaka manampy. *
OLANA 1: MISY AKONY EO AMIN’NY FANAMBADIANAREO NY FIAINANA TALOHA.
Hoy i Ellen, any Afrika Atsimo: “Mahatsiaro an’ilay vadiko taloha foana aho, indrindra rehefa mandalo amin’ny toerana nanaovanay vakansy. Indraindray aza lasalasa ny vavako, ka ampitahaiko aminy ilay vadiko faharoa.” Ahoana raha ianao no teo amin’ny toeran’ny vadin’i Ellen? Mety ho tezitra ianao, raha miresaka matetika momba ny vadiny taloha ny vadinao.
Hifankatia kokoa ianareo raha miara-manorina fahatsiarovana vaovao
SOSO-KEVITRA: Tadidio fa tsy ho vitan’ny olona mihitsy ny hanadino ny fanambadiany taloha, indrindra raha naharitra an-taonany maro izany. Misy aza milaza fa tsy tandrintandriny akory dia ny anaran’ilay vadiny taloha no niantsoany ny vadiny! Ahoana no hataonao raha sendra an’izany? Hoy ny Baiboly: “Aoka ny andaniny hiezaka hahatakatra ny fihetseham-pon’ny ankilany.”—1 Petera 3:8, Dikan-tenin’ny Taonjato Vaovao (anglisy).
Aza sakanana tsy hiresaka momba an’ilay vadiny taloha ny vadinao, satria fotsiny hoe saro-piaro ianao. Raha te hanao izany izy, dia mihainoa tsara ary mahaiza miombom-pihetseham-po aminy. Aza maika hieritreritra koa hoe ampitahainy amin’ilay vadiny taloha ianao. Hoy i Sedera, izay nanambady fanindroany folo taona lasa izay: “Tsy nandrara ahy tsy hiresaka momba an’ilay vadiko taloha mihitsy i Niry. Hitany kosa hoe fomba iray hahalalany ahy bebe kokoa izany.” Mety hanampy anao hifandray akaiky amin’ny vadinao mihitsy aza ny resadresaka momba ny lasa.
Mifantoha amin’ny toetra tsara mampiavaka an’ilay vadinao izao. Marina aloha fa mety tsy hananany ny toetra tsara na fahaizana sasany nananan’ilay vadinao taloha. Mety hanana toetra tsara na fahaizana hafa anefa izy. Eritrereto àry ny toetra itiavanao an’ilay vadinao ary ankamamio izany, fa aza ampitahaina amin’ilay vadinao taloha izy. (Galatianina 6:4) Hahatonga anareo hifankatia kokoa izany. Hoy Rasamy: “Tsy hisy namana mitovy izany mihitsy. Dia tsy hisy mihitsy koa ny fanambadiana mitovy.”
Inona no azonao atao, raha tsy tianao hanelingelina ny tokantranonao ny zavatra tsara niainanao taloha? Mila mahay mandanjalanja ianao. Hoy i Njiva: “Nilaza tamin’ny vadiko aho, indray mandeha, fa toy ny boky kanto niarahako nanoratra tamin’ilay vadiko taloha ny fanambadiako voalohany. Mety hanokatra azy io aho indraindray, ary hisaintsaina an’ireo fotoana mamy niarahanay. Tsy ao intsony anefa ny fiainako amin’izao. Miara-manoratra boky vaovao indray izaho sy ilay vadiko faharoa. Ao amin’io indray izao ny fiainako, sady mahatsiaro ho sambatra aho.”
ANDRAMO IZAO: Anontanio ny vadinao raha sanganehana izy, rehefa miresaka momba ny vadinao taloha ianao. Fantaro hoe rahoviana ianao no tsy tokony hiresaka momba izany.
OLANA 2: SAROTRA AMINAO NY MIFANDRAY AMIN’IREO NAMANA TALOHA, IZAY TSY MAHALALA AN’ILAY VADINAO FAHAROA.
Hoy i Ranto, izay nanambady indray enin-taona taorian’ny nisarahany tamin’ny vadiny: “Hitan’ny vadiko hoe nandinidinika sy nitsapatsapa toetra azy ny namako sasany, tamin’izahay vao nivady kelikely.” Zavatra hafa indray no nitranga tamin’i Tanjona. Hoy izy: “Nisy nilaza tamin’ny vadiko, teo imasoko, hoe tena tia sy nanembona an’ilay vadiny taloha, hono, ry zareo.”
SOSO-KEVITRA: Miezaha haka ny toeran’ny namanao. Hoy i Sedera, noresahina tany aloha: “Mafy amin’ireo namana indraindray ny hoe ny iray amin’ilay mpivady namany taloha sisa no miaraka aminy eo. Hafahafa aminy koa ilay izy.” Miezaha àry “hahay handanjalanja sy halemy fanahy tanteraka amin’ny olona rehetra.” (Titosy 3:2) Avelao ireo tapaka sy namana mba hizatra tsikelikely. Raha niova mantsy ny vadinao dia mety hiova koa ny namanao. Nilaza koa i Ranto fa niezaka tsikelikely izy mivady namerina tamin’ny laoniny ny fifandraisany tamin’ny namany taloha. Hoy koa izy: “Niezaka nitady namana vaovao koa izahay, ary tena nahasoa anay izany.”
Tsinjovy ny fihetseham-pon’ny vadinao rehefa miaraka amin’ny namanao taloha ianareo. Raha lasa tampoka any amin’ilay vadinao taloha, ohatra, ny resaka, dia mahaiza mandanjalanja mba tsy hahatsiaro ho atao an-kilabao izy. Hoy ny Ohabolana 12:18: “Misy manao teny tsy voahevitra, ka tonga toy ny fanindron’ny sabatra, fa ny tenin’ny hendry kosa manasitrana.”
ANDRAMO IZAO: Eritrereto mialoha izay fotoan-dehibe na fiaraha-mikorana mety tsy hampahazo aina anao na ny vadinao. Resaho hoe inona no azonareo atao rehefa misy miresaka momba ny vadinareo taloha, na manontany momba azy.
OLANA 3: SAROTRA AMINAO NY MATOKY NY VADINAO SATRIA NAMITAKA ANAO ILAY VADINAO TALOHA.
Hoy i Rajo, izay nilaozan’ny vadiny voalohany: “Natahotra foana aho sao hamitaka ahy indray ny vadiko.” Nanambady an’i Sahondra mantsy izy, tatỳ aoriana. Hoy izy: “Asa aho raha mba ho vady tsara toa an’ilay vadin’i Sahondra voalohany. Nanahy mihitsy aza aho sao hihevitra izy hoe tsy vady tsara aho, ka hanambady olon-kafa izy.”
SOSO-KEVITRA: Aza misalasala miresaka izay mampanahy anao amin’ny vadinao. Hoy ny Ohabolana 15:22: “Tsy tanteraka ny fikasana raha tsy misy resaka amim-pahatsorana.” Nifampiresaka tamim-pahatsorana i Rajo sy Sahondra ka lasa nifampatoky. Hoy i Rajo: “Nolazaiko tamin’i Sahondra fa tsy ho maimaika hisara-panambadiana izany mihitsy aho rehefa misy olana. Nitovy hevitra tamiko koa izy. Lasa tena natoky azy aho.”
Ataovy izay hatokisan’ny vadinao anao, raha nofitahin’ny vadiny taloha izy. Samy nisara-panambadiana, ohatra, i Sitraka sy Fidy. Nifanaraka izy ireo fa hilaza amin’ny andaniny ny ankilany rehefa nifandray tamin’ilay vadiny taloha. Hoy i Sitraka: “Nahatonga anay hilamin-tsaina izany.”—Efesianina 4:25.
ANDRAMO IZAO: Ry lehilahy, fero ny fifandraisana amin’ny vehivavy ankoatra ny vadinao. Ry vehivavy, fero ny fifandraisana amin’ny lehilahy ankoatra ny vadinao. Tsy amin’ny resaka mivantana ihany no tokony hanaovana izany, fa amin’ny telefaonina sy Internet koa.
Maro amin’ireo nanambady fanindroany no mahatsiaro ho sambatra. Afaka ny ho toy izany koa ianareo. Fantatrao kokoa izao ny tenanao, fa tsy hoatran’ny tamin’ny ianao nanambady voalohany. Hoy i Rajo: “Sambatra be mihitsy aho miaraka amin’i Sahondra. Efa 13 taona izao izahay no nivady. Tena mifankatia izahay, ary tsy te hisaraka mihitsy.”
^ feh. 5 Tsy mitovy ny fihetseham-pon’ireo maty vady sy nisara-panambadiana. Hanampy azy ireo hanana tokantrano sambatra anefa ity lahatsoratra ity, raha toa ka nanambady indray izy ireo.
^ feh. 7 Misy torohevitra hanampy anao hitaiza zana-bady ao amin’ilay andian-dahatsoratra hoe “Afaka ny ho Sambatra ny Fianakaviana Misy Raikely na Renikely”, ao amin’ny Mifohaza! Aprily 2012, navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah.
Inona ny toetra sasany mampiavaka ny vadiko, ka tena itiavako azy?
Raha lasa tampoka any amin’ilay vadiko taloha ny resaka, inona no hataoko mba hahazo toky ny vadiko hoe sarobidy amiko foana izy?
Hizara Hizara Afaka ny ho Sambatra ny Olona Nanambady Fanindroany